10 Waxyaabaha Aad U Baahan Tahay R, Python, iyo Hadoop ITS
10 Sababaha Adiga waa inaad barataa R, Python, iyo Hadoop
Falanqaynta Macluumaadka (Domain Analytics) Domain waxay ku sii jirtaa wixii ka badan filashooyinka barnaamijka Adeegga, ama Ururada SaaS, sida aynu si nadiif ah u ogaanno. Qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu ku dhaco Macluumaad weyn oo waxay leeyihiin tone oo furan oo loo shaqeeyo on jidka. Si kastaba ha noqotee, sameynta horay u sii galeysa Sayniska Warshadaha waa aasaas u ah fahamka waxa uu yahay iyo Xogta Sayniska Warshadaha si ay u degaan. Tani waa meesha R, Python iyo Hadoop yimaada oo halkan waa tobanka dhiirigelin weyn si ay u bartaan. Kuwani waa asal ahaan barnaamijyo leh barnaamijyo loo baahan yahay in la barto si loo jebiyo warshadaha sayniska ee macluumaadka, kuwaas oo ku lug leh magacyada sida Google, Bank of America iyo New York Times.
Helitaanka:Muxuu macmiil kale u filayaa inuu barto? R, tusaale ahaan, waxaa loo oggol yahay in uu soo bandhigo oo uu ordo oo u dhiibo macmiilka madaxbannaan si uu u fariisto oo uu wax uga ogaado halkaan. Python, markaa, mar kale, way ka yar tahay inay wax bartaan, qaarna waxay yiraahdaan waa mid toos u ah lahjadaha barnaamijka. Hadoop, waa mar kale, oo laga heli karo nidaamyo furan oo furan, taas oo ka dhigaysa mid si aan macquul u aheyn. Ku xiran hoygaaga, macmiilku wuxuu isticmaali karaa mid kasta. Wax fudud
Dib uhabaynta: Ilaa hadda sida baaritaanka warbixinta ay khusayso, seddexdan lahjadood ee barnaamijka furan ee barnaamijka furan ayaa ah kuwa ugu muhiimsan. Wareegtada soo dejinta xogta, MapReduce iyo Parallel Processing waxay si fiican u fulin kartaa iyaga, sida ka dambeeya ee marxaladaha baaritaanka ee isku dhafan waa in si joogta ah loo casriyeeyaa, taas oo mar labaad loo dhigo iyaga.
Wadada Wadada: Lahjadaha barnaamijka ayaa dhammaantood loo isticmaali karaa marxalado kala duwan, sida Windows, Mac OS X, Linux iyo labadaba wax badan, oo u oggolaanaya macaamiisha inay dhamaystiraan shaqadooda qalab kasta. R iyo Python naqshadayaashu waxay haatan ka fekerayaan habab si ay u maareeyaan cabbirka wargeysyada waaweyn oo isdaba jooga marxaladaha waaweyn, iyo qaadashada tallaalka labadaba SQL iyo NoSQL labadaba labadaba.
La qabsasho la'aanta ayaa sameeyey fudud: Saddexda luuqadood ee barnaamijka ayaa loo adeegsadaa si ay u daryeesho macluumaad ballaaran oo adag, oo loo yaqaanno Data Big. Diyaargarow adag oo adag ayaa suurtogal ah in ay suurtogal tahay in si fudud loo eego iyada oo la adeegsanayo lahjadaha, kooxo fara badan ama qaar badan oo ka shaqeeya. Python peruses macluumaadka ka sarreeya wax kasta oo R ah, si kastaba ha ahaatee labadaba si fiican ayaa looga wada hadlay Hadoop, siinta macaamiisha doorashada ah iyada oo ku xiran qaybaha kala duwan si ay u soo qaadaan midka uu la socdo.
Awesome awood: Iyada oo leh tiro badan oo faa'iido leh, lahjadaha ayaa kordhay aqoonsiga guddiga iyo agagaarka 2 macaamiisha macaamiisha adduunka iyaga oo adeegsanaya sayniska macluumaadka. Ilaa hadda R waxa uu kordhay qiimaynta guddiga Oracle, SAP, Netezza iyo Teredata ayaa bilaabay abuuritaanka dhexdhexaadin ah isticmaalka R oo ah taageero cilmiyeed.
Horumarka la qiyaasi karo: Isbedel kasta oo cusub ee barnaamijyada dib u habeyntu waxay ku xiran tahay mid ka mid ah saddexdan lahjadood tan iyo markii ay yihiin kuwa ugu horumarsan oo la qabatimay. Horumar cusub oo cusub sida ff iyo xannaaneeyaha, waxaa hadda la isku halleyn karaa si loo maareyn karo xogaha miisaaniyadda oo ka weyn xasuusta. Python peruses ayaa si faahfaahsan u soo bandhigeysa si wax ku ool ah oo isdaba-joog ah Hadoop waa abaalmarin gaar ah.
Waxyaalaha daabacaadda: Maadaama mulkiilayaasha barnaamijyada si wanaagsan loo dhexgeliyo rikoodhka rikoodhka, waxay yihiin kuwa ugu ballaadhan soo saaraha. Nadaafad sahlan oo la socota habka loo qaybiyo diiwaanada LaTeX iyo waliba qayb ka mid ah in lagu rakibo wargelinta erayada wax-qabadka waa mid aad u sareeya marka lagu daro dhibicda. Mid kasta oo ka mid ah lahjadaha waxay leeyihiin nidaamyo fara badan oo bayooloji ah, taasoo ka dhigaysa inay fududayso in la qaybiyo lana shaqeeyo tiro badan oo xog ah.
Easy in ay isticmaalaan, R, Hadoop iyo Python way fududahay in la fahmo waxayna hoosta ka dhigaan soo dejinta macluumaadka ka yimid Microsoft Excel, Access, MySQL, SQLite iyo Oracle, u oggolaanaya macmiil kasta oo leh shey kasta oo shaqeynaya iyada oo aan caqabad ku jirin. Python ayaa si guul leh loogu isticmaalay Luqad Dhaqameedka Aasaasiga ah iyo Apache Spark uu sameeyey macluumaadka laga helay Hadoop rucubyadu si fiican u furan.
Abaabulka: Isku xirnaanta bulshada iyo nidaamyada nidaamyada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ururada adduunka oo dhan iyo macaamiisha raaxada ah ayaa si joogta ah u dhexgalaan dhismayaasha si looga hadlo lahjadaha kuwan ka badan wax kasta oo kale, damaanad qaadka ganacsi joogta ah ee xogta wanaagsan. Anaconda dhawaan soo jiidatay waxay ka badan tahay 300 ama xirmo badan oo soo aruuriyay sahano ka yimid macaamiisha adduunka oo dhan wadahadalkooda, iyaga oo ku xiraya xidhxidhka mustaqbalka.
Debug fudud: Baadhitaan iyo baadhitaan aan waxtar lahayn ayaa leh daliilayaashan marka loo eego kuwa kale iyadoo loo eegayo xaqiiqda ah in qalabka xallinta dhibaatooyinka badanaa lagu sameeyo hababkan, oo u oggolaanaya macaamiisha in ay waxyaabo fiican u yeeshaan iyada oo leh heerar taxadar leh. Lahjad kasta waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah iyo faa'iido gaar ah, laakiin midkuu odhan karaa R, Python iyo Hadoop Qorshayaashu waxay sidoo kale yihiin kuwo la filayo in la isticmaalo si ay u ilaaliyaan qaabdhismeedkaaga nabdoon iyo kan kale ee ugu wanaagsan ee dhacda in aad u baahan tahay inaad tagto guud ahaan qaabeynta.
Tusaha Tababarka Python ee Bilowga
Sida loo bilaabi karo xirfad wata xog aad u weyn & Tababarka Hadoop